Iintshatsheli ze131 League of Legends kumzekeliso omnye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
MOBAs zezi Imidlalo yevidiyo ekwi-intanethi yabadlali abaninzi apho iqela labadlali lijongana namanye amaninzi kwimpumelelo yokugqibela. Uhlobo lomdlalo apho iindidi zeeklasi zenza ukuba abadlali bafumane uhlobo oluthile lomdlalo ukuze baphumelele uloyiso kwaye baqhubeke nokufumana amanqaku kunye nembeko.
Kodwa kukho iMOBA enye phakathi kwazo zonke ezifumanekayo ethe yafumana eyona nkxalabo izigidi zabadlali kwihlabathi liphela, Iligi yabadala abaphumelele. Waziwa ngokuba nguLoL, ngoku ungumculi ochithe iiyure ezili-191 ezobela zonke iintshatsheli ezili-131 zalo mdlalo wevidiyo udumileyo nowaziwayo.
I-LoL ikwazile ukugcina ii-eSports, ukhuphiswano apho abadlali abaninzi bakhuphisana khona ngesixa esikhulu semali, ukuqhubeka ukudibanisa abantu abaninzi nangakumbi Ehlabathini lonke nakwamanye amazwe, afana noMzantsi Korea, abona bantu babalaseleyo ngabantu abadumileyo abanjengoCristiano Ronaldo okanye uMesiya apha.
Ngesi sizathu, amaxesha ngamaxesha sifumana ezinye izindululo ezinzulu zobugcisa NjengoChristopher Cayco, onoxanduva kulo mzekeliso uqulethe zonke iintshatsheli ukuya kuTaliyah kumfanekiso omnye.
KwakunguChris ngokwakhe, lowo kunyaka ophelileyo weza ukuzoba Umzekeliso we-epic oqukethe i-721 Pokémon. Sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sikwazi ukufikelela kwividiyo ngulo mdali mnye apho abonisa yonke inkqubo yokuyila ekhokelele kulo msebenzi mhle womzekeliso. Unenketho yokuthenga iiprinta kweli qhagamshelo.
ukuba abalandeli bale MOBA Sisiqwenga esithi ukuba uyiprinte njengepowusta yegumbi inokuba ngumbono omkhulu. Umdlalo wevidiyo oye wazisa ii-PC kwisigaba sesibini segolide kunye namajelo afana neTwitch abukelwa ngamakhulu amawaka abantu yonke imihla.
Malunga namavidiyo evidiyo kunye izigqubuthelo zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iiyure ezili-191 ukuzoba iintshatsheli ezili-131 zeLigi yamaNqaku